Tusaalooyinka ugu fiican ee baakadaha hal-abuurka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Waxaa jira noocyo badan oo wax soo saarkooda ku dara a baakadaha hal-abuurka leh, taas oo ka dhigaysa inay ka soo baxaan inta kale ee alaabta on khaanadaha dukaamada waaweyn iyo dukaamada. Haddi ay si fudud u tahay soo jiidashada dareenka, ama si hal abuur leh loogu xidho isticmaalayaasha, fursadaha abuurista baakadaha asalka ah waa kuwo aan dhammaad lahayn.
Ma aha oo kaliya inay muhiim tahay in naqshadeynta xirmada ay tahay mid qurux badan, laakiin waa inay matala astaanta, iyo sidoo kale abuur iibka. Inta badan wax iibsiga ee aan ku samayno dukaamada waxaa la go'aansadaa marka aan horayba wax uga iibsanaynay dhismaha, sababtaas awgeed waa lagama maarmaan in la ogaado sida looga faa'iidaysto awoodda baakadaha.
Habka ugu wanaagsan ee lagu dhiirigelin karo waa in la arko kiisaska dhabta ah, waxaan arki doonaa naqshado la isku daray oo aan la ogaan doonin, marka lagu daro ka hadalka waa maxay baakadaha hal-abuurka ah iyo sida loo gaaro.
1 Waa maxay baakad?
2 Sida loo helo baakado hal abuur leh
3 Furayaasha baakadu ku shaqeyso
4 Tusaalooyinka baakadaha hal-abuurka leh
4.1 Molocow - caanahani waxay ka yimaadeen meere kale
4.2 Qalabka dhegaha ee Sony
4.3 Kondhomyada sare sida kiniinka Su Park
4.4 Dheji Maalinta Timaha
4.5 Bacaha qadada ka hortagga xatooyada, caaryada waa xalka
4.6 Smirnoff, baakadaha ay tahay in la diiriyo
4.7 shaadhka shaaha
4.8 Trident, iska ilaali dhoola cadeyntaada
4.9 U rogaaya Lego caruusadaha
4.10 Butterbetter, laba mid
4.11 Nabadgelyo shabaqyada miraha
4.12 Shirkadda Nike
4.13 Jeexa ugu fiican ee xagaaga Kleenex
4.14 Qulqulka malabka, oo toos uga yimaadda shinnida
4.15 mini saytuun
4.16 Kiniinnada tamarta firfircoonida
4.17 Clara iyo Ema, ukunta
Waa maxay baakad?
Baakadu, waxay noqotaa weelka alaabta aan ku hayno hareerahayaga, waxaad aragtay alaabta. Ma aha oo kaliya tan, baakadu waxay noqotay farshaxan, taas oo farshaxanka naqshadaynta weelasha kuwaas oo ilaaliya iyo duub alaabta.
Mid ka mid ah ujeedooyinka ugu muhiimsan, marka lagu daro samaynta naqshadaha shaqeynaya, waa in baakadu waxay soo jiidataa dareenka macaamiisha, Maadaama mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan uu yahay muuqaalka, oo waxaad ku ogaan kartaa haddii alaabtu ay noqon doonto mid guuleysta ama liddi ku ah.
Maanta marka la nashqadeynayo weelka, waa in aan xisaabta ku darnaa farsamada aan ku sameyneyno, qalinka la isticmaalayo iyo agabka aan ku shaqeyneyno. Aad iyo aad ayey u badan tahay in lagu arko khaanadaha alaabta leh weel dib loo isticmaali karo, aad bay muhiim u tahay in maskaxda lagu hayo daryeelka deegaanka.
Sidaa darteed, baakadku maaha inay ahaato mid fudud oo daboolaysa alaabta, si ay u noqoto baakad hal-abuur leh waa inay awood u leedahay u kaydi alaabta si wax ku ool ah, taas oo ah, lama jebin karo, foorarsan karo, ma beddeli karoiwm. Waa inay sidoo kale si cad oo fudud ugu wargelisaa faa'iidooyinka alaabta ay ku jirto. Baakadaha hal-abuurka leh waa inay meel dhigaan astaanta oo ay ka caawiyaan inay ka soocaan inta kale, oo la yaabto macaamilka.
Sida loo helo baakado hal abuur leh
Helitaanka baakado hal abuur leh oo ka yaabiya macaamiisha ma fududa. Waxaa jira waxyaabo badan oo cusub oo suuqa ku jira sidaas darteed waa a dagaal joogto ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha marka la naqshadeynayo xirmo, iyo isku day inaad ku xidhid macaamiisha. Tan waxaa u sabab ah in maalin walba ay helaan kumanaan farriimo ah, isku dayga in lagula tartamona waa hawl adag.
Si loo horumariyo baakad hal-abuur leh oo waafaqsan baahiyaha astaanta iyo dhagaystayaasha bartilmaameedka ah, waxaa jira taxane tabo aasaasi ah oo lagu xaqiijinayo.
Waxa ugu horreeya iyaga sharad ku saabsan asalka, laakiin had iyo jeer xisaabta ku dar nooca alaabta aad bixinayso, iyo dadweynaha aad la hadlayso. Tusaale ahaan, ma bixin kartid dharka dharka ah ee baakad kaas oo aadan arki karin ama taaban alaabta, waa wax aan shaqayn doonin.
Marka hore, waa inaad ogow meelaynta calaamadda aad la shaqaynayso, baakaduhu waa in ay kor u qaadaan astaanta iyo xeeladdeeda.
Iyo ugu dambeyntii, waligaa ha ilaawin dadweynaha aad la hadli doonto, waxa ay raadinayaan, sidee ayaad ula xiriiri doontaa, waa inaad ka jawaabto baahidooda.
Furayaasha baakadu ku shaqeyso
Sidii aan horay uga faalloonnay, baakad wanaagsan waa in la sameeyaa u sheeg macaamiisha alaabta uu ka kooban yahay iyo in ay u hoggaansanto dhammaan xeerarka. Xogta la muujiyay, miisaanka, tirada, stamps-caafimaad, taariikhaha dhicitaanka, iwm, waa in si cad loo muujiyaa oo leh cabbir weyn oo ku filan, waa in la helaa oo la akhriyaa iyada oo aan wax dhibaato ah.
Farsamada uu naqshadeeyuhu waajib ku yahay ilaali oo ku ilaali alaabta xaalad wanaagsan. Waa inay noqotaa badeecad la kaydin karo oo la qaybin karo iyada oo aan wax dhibaato ah la kulmin. Waa in la hubiyaa in weelku u hoggaansamo tallaabooyinka ilaalinta alaabta.
Waa in la tilmaamaa tilmaamaha isticmaalka iyo calaamadaha si loo furo alaabta. Tilmaamahan, waxaan ka caawineynaa macaamiisha inay si sax ah ugu raaxaystaan ​​alaabta.
Macaamiil aad u badan ayaa raadinaya alaabada ay cunaan si ay u yeeshaan a baakadaha dib loo warshadeeyay oo tixgelinaya deegaanka. U hoggaansanaanta dhinacyadan kaliya maaha inay si fiican uga hadlaan badeecada, laakiin guud ahaan astaanta guud.
Baakadu waa xarafka hordhaca ah ee ay alaabtu leedahay, markaa nashqaddeedu waa in laga fikiro oo la waafajiyaa in lagu dul dhejiyo khaanadaha dukaamada waaweyn ama dukaamada, ma noqon karto weel ay adag tahay in la beddelo, jabo ama la sameeyo. ma soo bandhigin alaabta ay ku jirto. Waa inay ka sareysaa dhammaan alaabooyinka la midka ah ee ku wareegsan.
Tusaalooyinka baakadaha hal-abuurka leh
Molocow - caanahani waxay ka yimaadeen meere kale
Qalabka dhegaha ee Sony
Kondhomyada sare sida kiniinka Su Park
Dheji Maalinta Timaha
Bacaha qadada ka hortagga xatooyada, caaryada waa xalka
Smirnoff, baakadaha ay tahay in la diiriyo
Trident, iska ilaali dhoola cadeyntaada
U rogaaya Lego caruusadaha
Butterbetter, laba mid
Nabadgelyo shabaqyada miraha
Jeexa ugu fiican ee xagaaga Kleenex
Qulqulka malabka, oo toos uga yimaadda shinnida
Kiniinnada tamarta firfircoonida
Clara iyo Ema, ukunta
Waxaan rajeyneynaa in ka dib markaad akhrido qoraalkan oo aad aragto tusaalooyinkan, waxaad furtay indhahaaga iyo maskaxdaada, oo joojiso inaad tixgeliso in baakadu ay tahay kaliya walxaha qurxinta ee alaabta, sababtoo ah aad ayey uga badan tahay taas, tan iyo naqshadaha kuwan, way awoodaan. Si toos ah u saameeya macaamiisha go'aanka iibka iyo aragtida aad ka leedahay calaamad.
Baakadaha wanaagsani waa mid ka mid ah walxaha ka dhigaya sawirka astaanta ugu dambeeya badeecadda. Iyada oo leh astaamo lagama maarmaan ah sida dib loo isticmaali karo, shaqaynaysa oo soo jiidasho leh, ka dhig weelku inuu noqdo shay qiimo leh. Waxaa jira adduun suurtagal ah, halkaas oo aan ka soo saari karno hal-abuurkeenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Tusaalooyinka ugu fiican ee baakadaha hal-abuurka ah